भ्रमण वर्ष संयोजक सुरज वैद्यसँग नेपाल वार्ता : ‘जम्मा १० करोड मात्र दिने को ?’ - संवाद - नेपाल
नियुक्तिको ९ महिनामा नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० का लागि के–के काम गर्नुभयो ?
२० लाख पर्यटक पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा गर्न भारत र चीन प्रवर्द्धनमा बढी केन्द्रित छौँ । चीनको सबैभन्दा ठूलो सी ट्रिपसँग सम्झौता गरेका छौँ, त्यसका फलोअर्स ३ सय मिलिनियम छन् । ‘सी यू इन नेपाल’ नाराबाट त्यहाँ प्रवर्द्धन हुनेछ । रोड सो पनि गर्दैछौँ । चीनका धार्मिक पर्यटकलाई पनि केन्द्रित गर्दै छौँ ।
भारतको दिल्लीमा एउटा कार्यक्रम गरियो । दिल्लीको मेट्रोमा पनि नेपालको प्रचार भइरहेको छ । ७ अगस्तमा इटालीको रोममा हुने एनआरएनएको कार्यक्रमसँग मिलेर ‘नेपाल प्रमोसन इन युरोप’ मा काम गर्दै छौँ । विदेशस्थित सबै नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल प्रवर्द्धनको काम भइरहेका छन् । पर्यटकको संख्याभन्दा गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउन केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि विमानस्थल, होटल सबैमा सुधार हुनुपर्छ । अहिले विमानस्थल सुधारको प्रक्रियामा छ । आन्तरिक विमानस्थल सुधारको काम पनि हुन थालेको छ । विमानस्थलमा अब ७० जना युवा तीन सिफ्टमा नेपाल आउने पर्यटक सेवाका लागि खटिनेछन् ।
तपाईं नेतृत्वको भ्रमण वर्ष ‘भिजिवल’ नै भएन भन्ने आरोप छ नि ?
मेरो काम गर्ने शैली भिजिवल हुने खाले छैन । हामीले परिणाम खोजिरहेका छौँ, प्रचार होइन । यो काम गरेर देखाउने ठाउँ हो । मलेसियाको भ्रमण वर्ष पनि २०२० मै पर्छ । त्यहाँको तयारी २०१७ देखि भएको हो, जबकि नेपालको तयारी ९ महिना हुँदै छ ।
सातै प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धन समिति त बन्यो तर त्यसले काम गर्न पाइरहेको छैन नि ?
सबै मुख्यमन्त्रीसँग कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफलमा छु । ठोस कामको तयारीमा छौँ । भ्रमण वर्ष भनेको खाली पर्यटक ल्याउने मात्र होइन, बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउने पनि हो । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।
पर्यटन व्यवसायी तपाईंको नियुक्तिमै असन्तुष्ट थिए । अझै विश्वासमा लिनुभएको छैन, किन ?
होटल व्यवसायबाट आएको भए, यो कामै नलाग्ने मान्छे, होटलको मात्र कुरा गर्छ भन्थे । एयरलाइन्सबाट आएको भए पनि त्यहीँ भन्थे । आरोप त लागिरहन्छ । मेरो स्वार्थ केही छैन । साथीहरूले के भन्छन्, मलाई त्यति महत्त्व लाग्दैन । नेतृत्व लिँदा कसले के भन्ला भन्ने आधार लिइँदैन । नेतृत्वको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने भन्ने सरोकार मात्रै छ मलाई । आजसम्म पर्यटन व्यवसायीले सी ट्रिपसँग सम्झौता गरेका थिए ? लोन्ली प्लानेट म्यागजिनमा नेपालबारे केही लेखेका छन् ? यी काम हामी गर्दै छौँ ।
लन्डनको मेट्रोमा नेपालको प्रवर्द्धन गर्न प्रयोग भएको फोटो थाइल्यान्डको परेछ, होइन ?
हाम्रो गल्ती भएको हो । त्यतिबेला ८ वटा प्रवर्द्धन रणनीतिमध्ये एउटामा गल्ती भयो । गल्ती मात्र हेरियो तर बाँकी ७ वटा रणनीतिलाई कसले राम्रो भन्यो ? जबकि त्यसरी नेपालको प्रचार पहिलोपल्ट भएको थियो ।
तपार्इं फोन पनि रिसिभ नगर्ने, सम्पर्कमा आउनै गाह्रो हुन्छ, किन ?
भ्रमण वर्षको जिम्मा लिएपछि बिहान ८ देखि बेलुकी ९ बजेसम्म खटेको छु । फोन उठाउँदै बस्ने हो भने अपरेटरजस्तो भइन्छ । केही जरुरी छ भने विभिन्न माध्यमबाट भेट्न सकिन्छ ।
सचिवालयमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएको छैन । सरकारले असहयोग गरेको हो ?
अहिले जनशक्तिकै अभाव त भएको छैन । सरकारी प्रक्रियाले सुस्त भएको हो । नियुक्त भएको ९ महिना पुगे पनि बजेट आएको बल्ल एक महिना भयो । बजेट नआएका कारण सचिवालयको कार्यालय बनाउन लागेको खर्च व्यक्तिगत रूपमै गरेँ ।
तपाईं सरोकारवाला मन्त्रालय (पर्यटन) लाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुहुन्छ भन्ने टिप्पणी छ नि ?
निरन्तर पर्यटन मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री, सचिवसँग कुराकानी गरिरहेको हुन्छु । विभागीय मन्त्री अहिले प्रधानमन्त्री भएकाले उहाँसँग पनि कुराकानी हुन्छ, भेट हुन्छ । त्यसलाई कसरी बाइपास गरेको भन्न मिल्छ ? मैले भ्रमण वर्ष सचिवालयलाई कम्तीमा ६०/७० करोड चाहिन्छ भनेर प्रस्ताव गर्दा जम्मा १० करोड मात्र दिने को हो ? आरोप लगाउनेले यसको जवाफ दिनु पर्दैन ?
भ्रमण वर्षकै समयमा सगरमाथा आरोहणमा विश्राम दिने प्रस्ताव किन गरेको त ?
संसारभर चासो छ, सगरमाथाको फोहोर र ट्राफिक जाम । बदनामी पनि भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि बीबीसीले सगरमाथा आरोहणको जाम र मृत्युको प्रश्न सोध्यो । हामीले सगरमाथा आरोहण नीति सुधार गर्नुपर्छ, नीति सुधार गर्दा आरोहणलाई विश्राम दिँदा हुन्छ भनेको हुँ । धेरै होइन, महँगा आरोहण दल ल्याउनुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : आवरण« भद्रगोल भ्रमण वर्ष
ट्याग: सुरज वैद्यआवरणसंवाद